Jenezy 37, 3-28
Nisy tompona tanim-boaloboka hoy i Jesoa, namefy manodidina sady nandavaka tany hanaovana famihazana. Kanefa isaky ny taom-pahavokarana, rehefa mandefa ny ankizilahiny handray ny vokatry ny tanim-boalobony ilay tompony, dia vono sy tora-bato no nasetrin’ny mpiasa ireo iraka. Nalefany tany hatramin’ny zanany, kanjo famonoana no nokasainy mba hahazoany ny lova. Dia novonoiny tany ivelan’ny tanimboaloboka ilay zanaka lahitokana.
Hahay hampamokatra ny fahasoavana ankinin’Andriamanitra amintsika anie isika. Mandefa ny mpanompony izy hitaky izany vokatra izany, ka tsy sanatria hihidy fo velona tahaka ilay mpanan-karena nolazain’ny Evanjely omaly isika, ka handavaka hantsana hanelanelana azy sy Lazara. Tsy ho sanatria kapoka sy tora-bato no havalintsika izay mangataka fiantrana amintsika. Irak’Andriamanitra izy ireny mba hizarantsika ny fahasoavana. Hampitombo ny fitiavantsika ny mahantra (Lazara, vonjen’Andriamanitra) sy ny fahantrana anie ny Karemy, mba hampifikitra ny fiainantsika amin’ny mandrakizay.
Alahady voalohan’ny Karemy – Taona D